Iqhosha lesi-5 lokutshixa iphone emva kweeveki ezimbalwa zokusebenzisa, abanye abasebenzisi baxela
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-iPhone 5 yokutshixa iqhosha emva kweeveki ezimbalwa zokusebenzisa, abanye abasebenzisi baxela
Ngaphambi kokuba siqale, kuya kufuneka sivume ukuba amaqhosha e-iPhone 5 ayinto emfutshane kakhulu. Nangona kunjalo, le ngxelo isebenza kuphela xa besebenza, kwaye ngenani labanini, oko akwenzeki ukuba kube njalo. Uninzi lwabasebenzisi be-iPhone 5 baxela ukuba isitshixo sabo sokutshixa kwi-smartphone asiphenduli emva kweeveki ezimbalwa zokusebenzisa, sinika iselfowuni sabo esikhanyayo phantse singenakwenzeka.
Ngombulelo, umnini we-iPhone 5 othathe ixesha lokurekhoda ividiyo oyibona ngezantsi kunika ingxelo yokuba wanikwa iyunithi yokutshintsha. Kodwa nokuba awufanelanga ukubuyiselwa kwaye i-iPhone 5 yakho iyasebenza nayo, ukuyilungisa akufuneki ibe yinto encinci, njengoko I-iPhone 5 yehla yiFixit ityhiliwe.
Kodwa uluhlu lwemiba ye-iPhone 5 ayipheleli apha. Kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, sibhale malunga ne-glitch enokwenzeka echaphazela Ukuphendula kwesixhobo kunye nesikrini sokuchukumisa xa isetyenziswe ngendlela ethile. Esinye isiphako esasikhona kwiApple & apos's s smartphone yayi imigca emileyo evele ngamanye amaxesha , kodwa esele igcinwe ilungisiwe ngesoftware.
Kwimeko apho unayo i-iPhone 5 ngokunjalo, ngaba iqhosha lakho lokutshixa lisebenza ngokufanelekileyo? Sazise ezantsi kwizimvo!
umthombo: Uphononongo lwe TAW (Youtube)
Iipikseli zikaGoogle ezimnyama zangoLwesihlanu
Qaphela i-7 okanye i-s7
UAsus ZenWatch 3 ekugqibeleni ufumana uhlaziyo lwe-Android Wear 2.0
Ngoku unokukhuphela i-Star Wars: I-Jedi yamaphephadonga okugqibela kuhlobo olukhethekileyo lwe-OnePlus 5T
Iintengiso zeVerizon Black ngoLwesihlanu 2019: Ugcino olukhulu kwi-Apple iPhone 11, i-iPhone XR, i-Galaxy S10, Qaphela i-10
I-embold-Iqonga leSoftware esekwe kwiSoftware
Ungazithatha njani iifoto ezintle nge-Samsung Galaxy S6- iingcebiso zekhamera ezili-9 kunye namaqhinga
Imiphefumlo emnyama yeselfowuni? Lo mdlalo ngowona ukufutshane onokufikelela kuwo kwaye iipos zangoku zinesaphulelo!
I-PSA: I-OnePlus 5T ayizukusebenza kwiVerizon naseSprint